M/weyne Farmaajo oo kulan deg deg ah la qaatay Jawaari, Muudeey & Cawad, kalana hadlay qodobo xasaasi ah – Puntlandtimes
M/weyne Farmaajo oo kulan deg deg ah la qaatay Jawaari, Muudeey & Cawad, kalana hadlay qodobo xasaasi ah
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan deg deg ah la qaatay kahor waqtiga Salaadii subax ee saaka, kaas oo looga wada hadlay arrimaha siyaasadeed ee hadda ka taagan golaha Shacabka iyo sidii gabi ahaanba loo baajin lahaa arrimaha ka taagan gudaha dawladda Faderaalka.
Wariyaha Puntlandtimes ee Muqdisho ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya uu la kulmay sadexda xubnood ee guddoonka sare ee baarlamaanka Faderaalka oo wadajira, uuna u sheegay in uu si buuxda hakad u galiyey kalfadhigii maanta loo balansanaa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Prof, Maxamed SH Cismaan Jawaari ayaa u sheegay Puntlandtimes.com in uu jiro kulanka ay la qaateen Madaxweynaha Soomaaliya, isla markaasna ay ogolaadeen in la baajiyo kalfadhiga maanta, ka dibna dib looga wada hadlo arrimaha siyaasadeed ee hadda taagan.
Guddomiye Jawaari ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday in la baajiyo kulanka, maadaama ay jirto kala aragti duwanaan ka dhex jirta Xildhibaanada.
Mr, Jawaari wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in la dhameyn doono khilaafka ka dhex taagan Xildhibaanada golaha Shacabka e dawladda Faderaalka, wixii xiligaas ka dambeeyana ay toos u gudan doonaan waajibaadkooda Qaran, taas oo ka dhigan in hoos loo dhigayo xasaradaha siyaasaded.
Shirkan deg deg ah ayaa qeyb ka ahaa talooyin xalay uu Madaxweynaha Soomaaliya ka helay guddi iskugu jira Aqoonyahano, Xildhibaano, Wasiiro, Siyaasiin hore oo ka soo jeeda beesha Daarood, ayna ku cadaadiyeen in uu baajiyo kulanka maanta dhici lahaa iyo in uu si deg deg ah xal ugu keeno arrimaha taagan oo uu isaggu masuuliyadiisa tahay, sidda ay ogaatay Puntlandtimes.com.